Crush Candy - Androidsis | Androidsis
Candy Crush waa ciyaar ay soo diyaarisay istuudiyaha King. Waxay noqotay mid ka mid ah ifafaalaha ugu weyn ee isticmaalayaasha sanadihii la soo dhaafay. Mid ka mid ah cayaaraha ugu badan ee laga soo dejiyo isticmaaleyaasha Android, oo sii wadaya qabsashada malaayiin dad ah oo adduunka ah maanta.
Qeybtaan waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad rabto inaad ka ogaato Candy Crush. Laga soo bilaabo wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan ciyaartan caanka ah, khiyaanooyinka lagu hor marinayo ama xiisaha ugu xiisaha badan ee ku saabsan. Haddii aad jeceshahay ciyaartan, waa inaadan ka maqnaan qaybtaan ku jirta Androidsis.
Sida looga faa'iidaysto raha gudaha Candy Crush Saga
by daniplay samee 6 maalmood .
Waa ciyaar la qabatimo oo malaayiin iyo malaayiin ciyaartoy ay ka dambeeyaan. Candy Crush Saga waxaa laga heli karaa gudaha…
Cube Blast Saga waa halxiraale cusub, oo uusan sameynin KING, kaas oo 3D ay ugu filan tahay inuu taas u rogo ...
Candy Crush waa mid ka mid ah ciyaaraha casriga ah ee ugu da'da weyn suuqa. In kasta oo sannado la heli karay, ...
King wuxuu naftiisa uqiyaaseeyay inuu ku guuleysto ciyaaraha mobilada isagoo wata Candy Crush Saga. Haddana mar kale soo noqo ...
Diamond Diaries Saga waa ugub ugubka ah Boqortooyada, abuurayaasha Saga weyn ee Candy Crush Saga. Waxay u timid inay sii wado ...
Cayaaraha sida PUBG Mobile waxay keenaan in ciyaaraha ka socda mobilada ay bilaabaan in loo arko si kale. IYO…
Candy Crush waa mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan ee aan ka heli karno taleefannada Android muddo dheer. Ciyaarta…
Ma aqaan inta kulan ee aan isku dayi karo usbuuca, laakiin waxaa jira tiro wanaagsan oo ka mid ah ...
U dhigida Candy Crush Saga inuu yahay xukunka guud ee cayaaraha-3 fiidiyowyada iyo ku dhowaad dhammaan ciyaaraha ...